Monday August 03, 2020 - 12:23:48 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli fatqalado siyaasadeed iyo kuwa amni ay wali ka jiraan wadanka Itoobiya ayuu maamul goboleedka Tigreega wuxuu wadaa dadaallo uu ku samaysanayo nidaam ka madax banaan dowladda Federaaliga ah ee ka jirta magaalada Addis Ababa.
War kasoo baxay baarlamaanka Itoobiya ayaa digniin loogu diray ismaamulka Tigreega oo ku aaddan in uu qaban qaabiyo doorashooyin madaxtinimo oo aan lala ogeyn.
Guddoomiyaha baarlamaanka dowladda Xabashida Itoobiya ayaa sheegay in dhaq dhaqaaqa uu wado ismaamulka Tigreega uu baalmarsanyahay dastuurka u degsan dowladda Itoobiya sida uu hadalka u dhigay.
"dowlad goboleedka Tigreega xaq umalahan in uu qabto doorashooyin khilaafsan dastuurka udegan dalka itoobiya waa in si deg deg ah ay ujoojiyaan xadgudubka siyaasadeed iyo midka dastuuriga ah ee ay gelayaan" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay baarlamaanka fadhigiisu yahay Addis Ababa.
Qodobka 102aad ee dastuurka Itoobiya ayaa dhigaya in golaha baarlamaanka ee loo yaqaan (NEBE) uu yahay midka kaliya ee sharci ahaan agaasimaya doorashooyinka maamul goboleedyada.
Madaxweynaha ismaamulka Tigreega ayaa dhowaan jeediyay hadal xasaasiyad abuuray kadib markii uu ku hanjabay in ay ka tashan doonaan dowladda Itoobiya haddii aan si deg deg ah loo xallin xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa amni ee dalka kajira.
Tan iyo bishii lasoo dhaafay markii nin Fanaan caan ahaa lagu dilay Addis Ababa ayay sare usii kacayeen rabshadaha wadankaas ka taagan kuwaas oo sababay dhimashada boqolaal qof iyadoona xabsiyada lagu guray siyaasiyiin kasoo jeedo qowmiyadda Oromada waxaana kamid ah Jowhar Max'med.